/blog/Masteron Propionate/Masteron (Drostanolone propionate) Mmetụta, Ụdị, Mmetụta mmetụta
Ihe na 03 / 27 / 2019 by Dr. Patrick Young dere na Masteron Propionate.
Ihe nile banyere Masteron (Drostanolone propionate)
1. Kedu ihe bụ Masteron Propionate? 2. Mastrone propionate ọkara ndụ
3. Masterone propionate ọgwụ eji 4. Masteron propionate mmetụta zuru ezu
5. Masteron propionate VS enanthate 6. Masteron propionate usoro onunu ogwu
7. Masteron propionate okirikiri 8. Masteron propionate mmetụta utịp
9. Zụta Masteron propionate 10. Masterone propionate reviews
Kedu ihe bụ Masteron Propionate?
N'okwu ndị steroid, e nwere Masteron nke bụ ihe DHT (Dihydrotestosterone). Ọ bụ steroid nke anabolic nke dị na ụdị injection. N'ahịa, ọ dị n'ụdị abụọ bụ Drostanolone Enanthate na Drostanolone Propionate (521-12-0) A makwaara ya Masto, Mast, na Mastabol.
Akwukwo nke Masteron mara Masteron Enanthate mgbe a na-akpọ propionate version Masteron Propionate (521-12-0).
Ị na-eche otú ọgwụ a mbụ si merie ahịa ahụ? Syntex wepụtara ya na 1970 maka oge mbụ. A chọpụtara Masteron Propionate tinyere Anadrol mana enweghi ike ịhapụ ya tupu Anadrol. Aha ya aha ya bụ Masteron ma nọgide na-enwe mmasị na ya ma nọgide na-abụ mmasị nye ọtụtụ ndị taa.
Mastrone propionate ọkara ndụ
Masteron Propionate nwere ọkara ndụ nke ihe dị ka ụbọchị 2.5.
Masterone propionate ọgwụ eji
Masteron Propionate a makwaara dị ka Drostanolone Propionate bụ steroid na-emepụta etrogenic (nke analogic steroid)AAS) nke e mepụtara na ebumnuche nke ibute ọrịa cancer. N'oge gara aga mgbe ndị ọrịa cancer anaghị enweta ọtụtụ nhọrọ, ọ bụ otu n'ime ọgwụgwọ a na-ejikarị eme ihe. N'oge a na-agwọ ya, a na-eji ya na Selective Estrogen Receptor Modulator akpọ Tamoxifen. Ha nile nwere ike igbochi uto nke ụfọdụ ụdị sel cancer. Ọ bụ ya mere ọ dị irè dị ukwuu n'ịgwọ ụbụrụ nke na-anabataghị nlekọta ịgwọ ọrịa.
Enwere ya maka ọgwụgwọ ọrịa cancer maka ihe karịrị afọ iri abụọ, mana n'ihi mgbaàmà ndị na-adịghị ọcha nke ọ na-akpata, ọ bụghị dị ka ewu ewu dị ka ọ dị n'oge ahụ.
Masteron bara uru na iweda ọkwa cholesterol nke nwere ike ibute nsogbu ahuike siri ike ma ọ bụrụ na ọkwa dị elu.
Masteron propionate mmetụta zuru ezu
Maka onye na-arụ ọrụ siri ike, ile anya shredded bụ otu n'ime ihe mgbaru ọsọ kachasị. Ọ na-eme ka ahụ mmadụ nwee anya dị ịtụnanya. Inwe oke buru ibu nke na-adịghị adabere na ya ga-eme ka ị maa abụba ọbụna mgbe ụbụrụ gị dị ka ịnwụ maka.
Masteron Propionate bụ otu n'ime steroid nke na-anapụta mgbe ọ na-abịa ịcha. Mgbe a na-eji ya eme ihe mgbe ọ na-agbaji, ọ na-eme ka mmadụ daa mbà, nke a bụkwa ihe mere ọtụtụ ndị ji ahọrọ iji ya na njedebe nke usoro ntụrụndụ ahụ ebe ọ bụ na ọ dị ugbu a ka otu onye na-adabere. Ihe mgbakwunye Masteron na-eme ka mmadụ belata abụba ọ bụla fọdụrụ na njedebe nke usoro ahụ.
Tụkwasị na nke a, ọ na-eme ka ahụ mmadụ dị ike. Na Masteron mmetụta nke etiti estrogenic na-eduga n'ịdị mma na nlele mmadụ niile. Mmetụta dị nnọọ n'ahụ na bodybuilders nwere ihe na-erughị 10% nke abụba ahụ. Oge ọzọ ịkwesịrị ileba anya na shredded na-adịghị mma, mgbe ahụ, Masteron Propionate bụ ụzọ aga.
Iche ezi ihe ezughị; ịkwesiri ịgbakwunye ike. Ọ dịghị ihe na-eme ka mmadụ nwee obi ụtọ karịa inwe ike ịrụ ọrụ ndị ọzọ karịa ka ị na-eji. Ọ na-eme ka ị dị ike karịa gị. Site n'ịbawanye ike gị, ị nwere ike ịbawanye ọnụ ọgụgụ nke mmemme ahụ ị na-arụ, nweta ahụ nrọ ahụ ma mezuo ihe mgbaru ọsọ niile i chere na ị gaghị enweta.
Otu n'ime nsonaazụ Masteron ị ga-achọpụta na ị nwere ike ibuli nnukwu efere. Na steroid a, ị nwere ike ịmalite mgbatị dị elu. Ndị a Masteron nwetara abughi nani nani ndi ozo ma ndi na-eme egwuregwu. Ọ / ọ nwere ike ịnọgide na-enwe calories na-egbochi nri ma ka na-eme ihe omume ya. Ọ na - enyere ya aka ka ọ ghara ibu arọ ma n'otu oge ahụ ọ na - enye ike, ntachi obi na mgbake ngwa ngwa nke dị oké mkpa maka ọrụ ya.
Drostanolone Propionate bụ otu n'ime steroid eji mee ihe mgbe onye chọrọ nnukwu n'agbanyeghị na ọ naghị enye ọtụtụ uru. Na Masteron vs Primobolan enweta ihe yiri nke a.
Ọtụtụ ndị na-agụnye Masteron Prop na atụmatụ ha na-eme mkpọtụ n'ihi ụda abụba a na-eme na mmetụta estrogenic. Njirimara abụọ ahụ na-eme ka ha hụ na ha nọgidere na-adakwasị uru ahụ ka ha ka na-adịkwaghị abụba.
Ọ bụ ezie na uru ndị a abaghị uru, steroid a zuru oke maka onye ọ bụla nke na-achọ ileba anya na ịbaba abụba, nnukwu na akwara ma mee ka ike ha dịkwuo mma.
Ogige abụọ ahụ riri ihe dị iche iche Masteron ma nwee ọdịiche dịtụ. Otu n'ime njirimara ha na-ekerịta bụ na ha bụ injectables na nke a na-eme ka ha nwekwuo mmasị na obodo ahụ. Ha abụọ na-enye ihe ndị dị ịtụnanya na-enweghị itinye onye ọ bụla n'ihe ize ndụ ịnata ahụhụ dị egwu.
Ihe dị iche na-abata n'ime ndụ ha, usoro ogwu, na ike. Masteron Enanthate bụ ihe dị iche iche na-echekwa oge mgbe Masteron Propionate dị mkpirikpi.
N'ihi ya, Masteron Enanthate eji ya maka ogologo oge n'ogologo, ntụgharị, iri na izu iri na abụọ ma ọ bụ karịa karịa ebe a na-eji Masteron Propionate maka oge dị mkpirikpi nke bụ izu anọ na isii. Masteron Propionate na-eme ngwa ngwa mgbe Masteron Enanthate nwere ike iwepụta oge ka ị hụ nsonaazụ ya.
Maka Masteron Propionate usoro onunu ogwu nyere di ala karia nke Masteron Enanthate. Otú ọ dị, ọ na-eme ọtụtụ ugboro n'ihi na ọ na-esi ngwa ngwa pụọ ​​na usoro ahụ. A na-enye Masteron Enanthate dosage na okpukpu abụọ okpukpu abụọ n'izu n'ihi na ọ na-eme ngwa ngwa ma na-anọgide n'ime ahụ maka ogologo oge.
Masteron Enanthate nwere ọkara ndụ nke ihe dị ka ụbọchị iri ma nke propionate bụ 2.5. Dị ka nke a, Masteron Enanthate na-ewe ogologo oge tupu ekpochapụ ahụ ya ma e jiri ya tụnyere Masteron Propionate.
Masteron propionate usoro onunu ogwu
Ịghọta usoro Masteron propionate dị mkpa n'ihi na ọ ga-eme ka ị ghara ịdaba ná nsogbu ndị nwere ike ịbịakwute gị ma ọ bụrụ na ị ghara iji ya dị ka ọ kwesiri. Ihe omimi omimi nke di na Masteron propionate ga-enyekwara gi aka ikpebi ego ole i ga - eji mee ka uru Masteron kacha.
Ụdị Masteron ọkọlọtọ maka nwoke tozuru etozu bụ 300-400mg kwa izu. Ọ pụtara na ọ dị gị mkpa ịnwe ọgwụ nje 100mg n'ụbọchị ọ bụla maka izu isii na asatọ. Otú ọ dị, izu isii ma ọ bụ asatọ adịghị anọchite anya ọkpụkpụ Masteron dum, ma ọ bụ oge nke ọtụtụ ndị na-ahọrọ iji dị ka akụkụ nke a Masteron nchịkọta.
Ụfọdụ ndị na-ahọrọ ịkọwa ọgwụ ha na-eme kwa ụbọchị, ọ bụ ezie na nke a apụtaghị na ha na-ewepu ụbọchị ọ bụla ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-eji Drostanolone Enanthate, otu ma ọ bụ abụọ injections kwa izu zuru ezu.
Maka ndị inyom na-eji ọgwụ a agwọ ọrịa ara ara, usoro nhazi nke 100mg, ugboro atọ kwa izu maka izu asatọ ruo iri na abụọ ka akwadoro. Ọ nwere ike iduga mgbaàmà ndị na-agba ume, ma ọ bara uru.
Maka ndị na-eme egwuregwu na-achọ ịchọta ọrụ ha, 50mg kwa izu ezughị oke mgbe e were ya maka oge izu anọ na isii. Mgbe ị na-ekpebi ịmalite iji ọgwụ a eme ihe, ọ dị mma na ị na-amalite site na nkwụnye ala iji nwalee nkwụsị. Ụmụ nwanyị nwere ike ịga 100mg ma ọ bụrụ na ọgwụ ahụ dị mma n'ahụ ha. Ngwá Masteron nke karịrị 100mg kwa izu maka ihe karịrị izu anọ ma ọ bụ isii nwere ike ime ka mmadụ na-ata ahụhụ site na mgbaàmà ịmalite ịmalite ime ihe.
Masteron propionate okirikiri
A pụrụ iji masteron naanị ma ọ bụ jikọta n'akụkụ steroid ndị ọzọ na nsoro Masteron. Ọ dabere na uru Masteron ị chọrọ inweta. O nwere ike ịbụ ịkọ ụda ma ọ bụ usoro nkwekọrịta. Masteron egosiputa nrụpụta dị mma mgbe ọ na-eji iji belata oge mgbagwoju anya ebe onye ọrụ ahụ na-eme ka ọ ghara ịba abụba ma mekwuo nkọwa nke ahụ ike ya. Nke a bụ nkọwa nke ihe nwere ike ịbụ Masteron.
Mmalite nke Masteron
N'ebe a, Masteron Enanthate na-etinye ya n'ọrụ n'ihi ọnọdụ dị mma nke ọtụtụ ndị na-amalite na bodybuilders na-achọ na steeti androgenic / anabolic steroid (AAS). Uru nke iji Masteron Enanthate bụ na ọ na-enye ohere maka usoro nkwụsịtụ na-adịghịzi adị na ya testosterone Enanthate.
N'okwu a, onye kwesiri iji Testosterone Enanthate mee ihe na 300-500mg kwa izu. Ị nwere ike iji usoro onyonyo nke ị na-eche ọrụ kacha mma maka gị nakwa na ahụ gị nwere ike ịnagide. Isi ihe mere ị ga-eji na-agba ọsọ dị otú ahụ bụ Masteron bụ ịme ihe dị ka ihe mmeghe na iji nwalee nsogbu Masteron. Ebe ọ bụ na Masteron nwere aromatase na-egbochi mmetụta, ọ dịghị mkpa iji ya na onye ọzọ na-eme ihe aromatase ọzọ. Otú ọ dị, mmetụta na-emechi emechi adịghị ike, ọ bụrụ na ị na-eji ọtụtụ ogwe aromatizable na nchịkọta. Masteron nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ nke ọma, ọ ga-adịkwa mkpa ka ị jiri onye mmegide siri ike. Nke a bụ ihe mmalite nke Masteron Cycle;
Oge - izu iri na abụọ
Site na izu 1-12
Masteron (Drostanolone Enanthate) na 400mg kwa izu
Testosterone Enanthate na 300-500mg kwa izu.
Masteron nke dị n'etiti
Ebumnuche nke a na-eme ka a na-enweta nsị ụrọ na nke anụ ahụ. Ọ na-eme ka uru ahụ sie ike ma n'otu oge ahụ, ọ na-enye ụkọ abụba ma ọ bụ uru anụ ahụ na oke ntakịrị uru bara uru na enweghị nkwụsị mmiri. Otú ọ dị, iji mezuo nke a, ị ga-eji ya rie nri nke nwere ike inyere gị aka ịghọta nsonaazụ ndị a.
A na - eji Testosterone mee ihe na nyocha nke 100mg kwa izu na Testosterone Replacement Treatment. Ihe kpatara nke a bụ iji gbochie nkwụsị nke mmepụta nke Testosterone site na steroid anabolic na usoro a na-enye ya ka ọ bụrụ nke na ahụ na-aga n'ihu na-arụ ọrụ ọ bụla.
Usoro ọgwụgwọ Testosterone dị ala na-atụkwa aro ọ bụla aromatization nwere ike ime; ya mere ọ dịghị mkpa maka iji onye aromatase inhibitor. Ojiji ma Masteron na Anavar na-enye otu anụ ahụ siri ike ma ọ bụ site na ịcha ma ọ bụ site n'inweta ụyọkọ ụrọ n'emeghị ka mmadụ nwee nsogbu site na njigide mmiri.
Izu 1-10, were;
Masteron (Drostanolone Propionate) 100mg ụbọchị ọ bụla ma ọ bụ 400mg kwa izu
Testosterone Propionate na 100mg kwa izu ma ọ bụ 25mg ụbọchị ọ bụla.
Anavar na 50-70mg kwa ụbọchị
Ọ bụ Masteron kachasị mma nke mmetụta ya na-eme ka ahụ sie ike nakwa ka ọ na-egbutu mgbe ọ ka na-enye ike dị oké mkpa iji mee ka ịkwanye ma ọ bụ inweta ahụ ike. Ihe niile yiri nke dị na Intermediate, naanị ihe dị iche bụ na na nke a, enwere mgbakwunye nke Trenbolone.
Ndị na-arụ ọrụ banyere Bodybuilders banyere Masteron uru ọ na-enye ọtụtụ n'ime ha ịmara mgbanwe dị ịrịba ama na mgbanwe dị na ahụ ha. Uru Masteron ga-aka mma ma ọ bụrụ na eji ya nri nri na usoro ọzụzụ nke dabara na ihe ga-esi na ya pụta. Trenbolone nwere ike na anaghị aromatize na Masteron; ha na-enye nsonaazụ zuru oke.
Oge - 10 izu
Masterone (Drostanolone Propionate) na 400mg kwa izu / Drostanolone Propionate 100mgkwa ụbọchị.
Njikọ nke Testosterone na 100mg kwa izu ma ọ bụ 25mg kwa ụbọchị ọ bụla
Trenbolone Acetate 400mg kwa izu ma ọ bụ 100mg kwa ụbọchị ọ bụla
Masteron propionate mmetụta utịp
N'ihe dị ka ọrịa Masteron dị, ọgwụ a egosiwo na ọ ga-ekwe omume. N'ime ụmụ nwanyị, a na-akọ na ọ na - akpata mgbaàmà nke ịmụ na - emepụta nje virus, ọnọdụ nke nwere ike iji ya mee ihe n'ụzọ ziri ezi. Nke a bụ mmetụta mmetụta Masteron nke a na-agbaso n'òtù ha;
Ụfọdụ n'ime mmetụta ndị Masteron bụ androgenic. Ha gụnyere ntutu isi ahụ, ihe otutu, na ntutu nke ntutu isi ngwa ngwa na ndị na-adịkarị nchacha nwoke. N'ime ụmụ nwanyị, a na-akọ akụkọ ntụrụndụ nke ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ime ihe.
Otú ọ dị, ị ga-achọpụta na mgbaàmà na-emepụta nje na-eme mgbe mmadụ nọ na Masteron dị elu, dịka mgbe ị na-agwọ ọrịa kansa. Site n'inwe ụda dị ntakịrị, o yighị ka ị ga-ata ahụhụ site na mmetụta ndị a na-emetụta Masteron. Ọ bụrụ na ha anọgide, kwụsịrị Masteron, ihe mgbaàmà ahụ ga-apụ n'anya.
Masteron nwere ike imetụta ọkwa cholesterol n'ụzọ ụfọdụ. O nwere ike ịbụ site na ọnụ na HDL cholesterol ma ọ bụ mmụba na LDL cholesterol. E nweela ihe ụfọdụ na-adịghị mma na mgbali ọbara nke a kọọrọ.
N'iburu nke a n'uche, ọrụ cholesterol dị oké mkpa mgbe ọ na-agwọ ya. Ozokwa, ọ bụrụ na ị nwere ọnọdụ dị ugbu a na cholesterol dị elu, mgbe ahụ, ọgwụ a adịghị mma maka gị. Ọ bụrụ na ị naghị ata ahụhụ na nke a, jide n'aka na ị na-ebi ndụ ndụ enyi cholesterol. Ihe nke a pụtara bụ na ị kwesịrị ị na-eri ihe oriri dị mma nke nwere omega acids bara ụba n'ụba nakwa itinye aka na mmekorita obi.
The ozi ọma bụ na Masteron abụghị onye na-agwọ ọrịa steroid andbolic anapatotoxic na-egbu egbu na ọ gaghị eme ka ọ ghara imebi imeju gị. Ọ dịghị mkpa ichegbu onwe gị banyere imeju gị mgbe ị nọ Masteron Ọgwụgwọ.
Mmetụta mmepụta nke Testosterone bụ otu n'ime mmetụta ndị dị na Masteron. Inwe ala testosterone na ahu abughi nani umuaka, mana o nwere ike ime ka i na ahuhu di iche iche. Iji gbochie nke a, ịkwesịrị iji testosterone iji jide n'aka na ị nweghị mmebi.
Mgbe ọkpụkpụ Masteron gasịrị, ọ dị mkpa ka ị rụọ PCT nke na-enyere aka n'ịgba ọsọ ọsọ. N'ihi ya, mmepụta nke testosterone bụ nke ga-alaghachi n'oge nkịtị.
Gynaecomastia na njigide mmiri bụ ụfọdụ n'ime mmetụta ndị mmadụ na-atụ egwu mgbe ha na-eji steroid eme ihe. N'ụzọ dị mma, mmetụta ọ bụla nke estrogenic adịghị eme na Masteron ebe ọ bụ na ọ nweghị ụdị progesin. Ọ pụtakwara na ọbara mgbali elu nke mmiri mmiri ga-eme ka ọ ghara inwe nchegbu banyere iji Masteron mee ihe.
Na steroid a, ọ gaghị adị gị mkpa ịnweta estrogen. Otú ọ dị, dabere na ngọngọ Masteron ma ọ bụ nchịkọta ị na-ewere, ị nwere ike ịnweta estrogen.
Zụta Masteron propionate
Onye ọ bụla na-eme egwuregwu ma ọ bụ onye na-eme egwuregwu nwere ike ịdị mkpa iji Masteron propionate mee ihe ọbụlagodi otu oge na ọrụ ha. Ọzọkwa, ndị dị mkpa Masteron prop n'ihi na ebumnuche ọgwụ nwere ike ịnọ na-eche ebe ịzụta ya.
Oge ụfọdụ, ọ bụghị ọtụtụ nhọrọ. Maka bodybuilders, otu ga-abịakwute nnukwu guy n'ụlọ mgbatị ahụ ma jụọ ha ka ọ bụrụ onye na-ezo aka. Ndị chọrọ ọgwụ ahụ ga-enwekwa nkwurịta okwu na ndị enyi ma rịọ maka ụlọ ahịa kacha mma ha zụtara ya ma nwee olileanya maka ihe kachasị mma. Ụbọchị ndị a, ihe dị iche. Ndị mmadụ anaghị achọ ịchọta ụlọ ahịa ha iji zụta ihe ha chọrọ. E nwere ihe ọzọ; ịzụta online.
Dị ka ụfọdụ nwere ike ileghara ịntanetị, ọ bụ ebe kacha mma ị nwere ike nweta Masteron maka ire ere. Ọ bụ ụzọ dị mfe ịnweta ma dị mma karịa ebe ị nwere ike ịzụta Masteron propionate.
N'ebe a, ị nwere ike ịgụ nyocha, usoro kachasị mma, na mmejọ nke ndị mmadụ mere na n'oge gara aga na ntinye nke ụlọ gị, ụlọ ọrụ, wdg. N'agbanyeghị ọnọdụ gị, a pụrụ iziga ngwaahịa ahụ gaa ebe kachasị mma gị. Ọbụna ka mma, ị ga-esi nweta ịzụta na ịnweta ngwugwu gị na ezughị ezu zuru ezu. Onye ọ bụla agaghị achọ ịma ihe ị na-eme.
N'ezie, ịntanetị ezughị ezu na onye ọ bụla. Ọ dịghị mgbe ị na-ejide n'aka na ị ga-enweta ngwaahịa gị mgbe ị kwụrụ ha ụgwọ. E wezụga nke ahụ, ị ​​gaghị ejide n'aka oge ole ọ ga - ewe gị iji nweta ha. Ezigbo ihe bụ nsogbu ndị a nile. Ihe ị ga - eme bụ ịnweta isi ihe masteron propionate a pụrụ ịdabere na ya, ị gaghị echegbu onwe gị banyere iwu ọ bụla i mere.
AASraw bụ ebe kacha mma ị nwere ike ịzụta Masteron propionate. Anyị na-enye Masteron a pụrụ ịdabere na ya maka ire ere ego Masteron, anyị na-ebikwa ngwa ngwa. Ndị ọzọ karịa na Masteron anyị dị elu. Ọ bụghị naanị na ọ ga-enye gị ihe kachasị mma Masteron mana ọ ga-ewepụ gị oge kachasị aka iji chọpụta ihe ọ rụpụtara. Anyị na-eche banyere ahụike gị, ma ị nwere ike ijide n'aka na Masteron propionate dị nchebe ma dị irè. Get Masteron propionate site n'aka anyị taa wee chọpụta ihe Masteron dị ịtụnanya na oge kachasị anya.
Masterone propionate reviews
Drostanolone Propionate nwere ike inye mmetụ dị mma na ike mmadụ niile yana inye gị ihe ndị ị chọrọ mgbe niile. Ị ga-achọpụta na Masteron tupu mgbe ọ bụla ndị na-eweta ọrụ site n'aka ndị ọrụ bụ ụwa abụọ. Nke a bụ ụfọdụ n'ime nyocha ndị sitere na ndị jiri ya n'oge gara aga;
Chen na-ekwu, sị, "Eji m oge buru ibu na-eche echiche ihe m kwesịrị iji mee ka ọ dịkwuo ala. Enwere m nnukwu akwara, ma ha anaghị ahụ anya dị ka m chọrọ ka ha bụrụ. O yiri ka ọ dị ọtụtụ abụba kpuchie ha. Mgbe m nyochachara ọtụtụ ihe, abịara m hụ Masteron Propionate nke ọtụtụ ndị toro. N'etiti otutu steroid eji eji egbutu, onye a puru n'èzí, agwara m onwe m, gịnị mere ị ga - eme ka ọ gbalịa? Agwara m ya ma tinye ya na mbelata m. N'ime izu anọ, amalitelarị m ịhụ ọdịiche ahụ. Site na oge m na-eme ya, ahụ m siri ike. A na-ahụ ahụ m mgbe m na-agafe. Ihe dị mma bụ na m nọgidere na-anọgide na-ahụ ahụ m. Enwere m obi ụtọ na Masteron Prop ma gwa ya ka onye ọ bụla nwee mmasị inwe nnukwu ahụ. "
Zhang na-ekwu, sị, "Ọ fọrọ nke nta ka m nwee mgbakọ izu asatọ m, ma enwere m obi ụtọ na Masteron. Ọrịa a na-ahụ m n'anya, ndị ọrụ ibe m niile nọ n'ụlọ mgbatị ahụ achọpụtala. Ha na-ajụ m ihe m na-eji iji nweta nsonaazụ dị egwu. Maka izu asatọ, enwebeghị m mmetụta ọ bụla dị egwu. Ọ na - eme ka ọ bụrụ steroid kasị mma m jirila mee ihe. Ị nwere ike ịtụkwasị obi na reviews Masteron, ị ga-aghọrọkwa ezigbo ihe. Ọkpụkpụ a na-egbu egbu bụ nanị ihe kasị mma. "
Ah Kum na-ekwu, sị, "Dịka onye na-eme egwuregwu, enwere m ahụhụ site na enweghị ike zuru ezu n'ihi enweghị ụba starch na nri m. Mgbe ụfọdụ, m nwere ike ịga maka ịgba ọsọ na ọbụghị ọbụna ọkara. I nwere ike ịkọwa otú ọ ga-esi mee ka ọ bụrụ mkparịta ụka mgbe ị nwere asọmpi asọmpi na otu ọnwa na ịmalite ịmalite ịkpagbu gị. Enyi na-atụ aro Masteron Propionate n'ihi arụmọrụ ya na-agbakwunye ume. Amụtakwara m na ọ gaghị achọpụta ya n'oge ule nyocha ahụ n'ihi na ọkara ndụ ya. Ruo ugbu a, o nyela m ike niile m chọrọ. Enwere m ike ịme ụbọchị niile n'ebughị ụzọ mee ogologo oge ezumike dịka m mere n'oge gara aga. O meela ka m nwee ike inweta ihe karia m choro ya ma jiri ya mee ihe ruo ogologo oge m na-agbaso agbụrụ ọ bụla. Ọ bụ nnukwu steroid. "
Chunhua na-ekwu, sị, "Masteron Propionate bụ ezigbo ihe mgbe ọ na-abịa ịba ụba, m na-ekele ruo mgbe ebighị ebi maka ya. M na-eji ya na nchịkọta m n'ihi na enwere m asọmpi ihe ngosi n'akụkụ akụkụ na ihe niile m nwere ike ikwu bụ na ọ bụ onye mmeri. Ụfọdụ ndị nọ na-agagharị na ya, ma ihe nzuzo ahụ na-enweta àgwà Masteron maka ire ere. Ana m azụ ya mgbe niile site na AASraw ma enwebeghị nsogbu ọ bụla mara mma. Karịa na ha enwetawo ego Masteron kasị mma na ị nwere ike ịbanye n'ahịa. Ugbu a, m na-adabere ma nwee ike igosi na m ga-apụta ihe kacha mma. Ọ na-agbapụta abụba n'emeghị m ka m nwee nsogbu ndị ọzọ na-akpata steroid. Anọ m na-adịgide adịgide ruo mgbe ebighi ebi, m ga-aga Masteron Propionate mgbe niile. "
Kum na-ekwu, sị, "Nri a enyeworo nne m aka na-arịa ọrịa aka ịlụ ọgụ kansa. Mgbe anyị tinyechara ọtụtụ ọgwụ na chemotherapy ma na-ata ahụhụ site na mmetụta ọjọọ ọ kpatara, anyị nwere ike ịhụ ìhè na njedebe nke ọwara ahụ. Ọ bụ nhọrọ kasịsị mma ma ọ bụrụ na ọ dị gị ka ọnya ara na-ewute gị. "
Mmega na mmeputara nke mmadu: Nsogbu ugbo ala na ihe kwesiri ime ..., Diana Vaamonde, Stefan S du Plessis, Ashok Agarwal, peeji nke 230
Anabolic Edge: Ihe Nzuzo maka Nkume Mkpọpụ Ahụ Ọzọ, Phil Embleton, Gerard Thorne, Robert Kennedy Publishing, Page 18
Zụta Masteron Propionate ntụ ntụ maka bodybuilding: 6 eziokwu ị kwesịrị ịma !!!
Methasterone Steroid nke kachasị ike (Superdrol) Prohormone Masteron Enanthate Na Longer Na - eme Androgenic Anabolic Steroid (AAS)